Owesifazane uboshelwe ukusiza kudlwengulwe indodakazi | News24
Owesifazane uboshelwe ukusiza kudlwengulwe indodakazi
Bloemfontein – Owesifazane waseFree State ubhekene necala lokudlwengula nokuhlukumeza ingane ngezinsolo zokusiza amadoda adlwengule indodakazi yakhe eneminyaka engu-11 ubudala ngokusho kombiko.
Ngokubika kweSowetanlive lona wesifazane oneminyaka engu-33 ubudala nomyeni wakhe oneminyaka engu-43 ubudala baboshwe ngoLwesihlanu ngemuva kokuba amaphoyisa elunywe indlebe ngezinsolo zokuhlukumeza ingane.
Amaphoyisa anikele emzini wale khaphuli eBloemspruit wafica izingane ebezingcole zixathuka zisendaweni engakulungele ukuhlala umuntu ophilayo.
Kunezinsolo zokuthi unina wale ntombazane ubedayisa ngengane yakhe kumadoda afuna ucansi kanti ngesikhathi la madoda ezitika ngenodakazi yakhe yena ubewasiza ngokubamba ayicindezele.
OLUNYE UDABA: Ukhala ngamaphoyisa uyise wentombazane eyabulawa
Indodana yakhe kutholakale ukuthi beyidla izidakamizwa kodwa akucacanga ukuthi naye ike uyahlukunyezwa yini ngokocansi phambilii.
Zombili lezingane bezinezibazi zokulimala emzimbeni.
Okhulumela amaphoyisa uConstable Peter Kareli uthe:
“Siyaqhubeka nophenyo njengoba lezi zingane siziyise ezibhedlela ukuze zihlolwe kabanzi.
Sithole ukuthi ingane yentombazane isike yadlwengulwa kaningi izikhawu ezahlukene,” esho.
Laba kulindeleke ukuthi bavele enkantolo ngomhlaka 8 kuJuni 2015.